Ghostwriter Psychology I Ma u baahan tahay caawimaad xagga qorista? Waraaqaha
Cilmi nafsiga Ghostwriter
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmu-nafsiga
Koorsada cilmu-nafsiga waxay raacaysaa qaab dhismeed isku dhow oo isku mid ah bilowga semestarka jaamacadaha Jarmalka. Si kastaba ha noqotee, sababo taariikhi ah, jaamacadaha qaar waxay leeyihiin astaamo gaar ah waxayna diiradda saaraan cilmi baarista iyo barista. Maaddooyinka aasaasiga ah waxaa ka mid ah habka, cilmu-nafsiga guud, cilmu-nafsiga shakhsiyadda, laakiin sidoo kale cilmu-nafsiga koritaanka iyo cilmu-nafsiga. Mawduucyo xiiso leh oo aasaas u ah xirfaddaada dambe ee xirfadeed. Sababtoo ah marka lagu daro wadada loo maro aagga daweynta, shahaadada cilmu-nafsiga waxay bixisaa qodobo kale oo badan oo muhiim ah iyo aagag mustaqbalkaaga xirfadeed.
Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaa inta badan lagaa hor imaan doonaa xogta tirakoobka iyo qiimeyntooda iyo tarjumaadooda Sidaas darteed waa faa'iido in la barto barnaamijka SPSS. Qiimaynta noocyada xog uruurintu waa qayb aad u dhib badan oo waqti badan ku qaadata waxbarashadaada. Shaqadan, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato caawimaadda qoraaga cirfiidka. Sidaa darteed, macno ayey leedahay in la helo caawimaad iyo kanaga shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Si aad u soo qorto shahaadada dhakhtarka ama qoraalka ka soo baxa adeeggayaga qoraaga. Na sii shuruudahaaga shaqsiyeed ee shaqada iyo qoraaladeena cirfiidka ee waaxdaada ayaa la wareegaya shaqadaada. Gebi ahaanba caqli badan Sidoo kale waa lagugu soo dhaweynayaa inaad taas sameyso xiriirka buuxi si aad u codsato dalab aan qasab ahayn. Hadaad lacag la’aan haysato dib u xusuusasho tani dhib ma aha sidoo kale. Kaliya dhagsii badhanka wicitaanka bilaashka ah. Kadib waan kula soo xiriiri doonaa waqtiga adiga kugu habboon.
Shahaadada cilmu-nafsiga, maaddooyinka soo socdaa waa kuwo aad u baahan oo inta badan u adeegta yareynta tirada ardayda:
Cilmi nafsiga guud
Cilmu-nafsiga kala duwan
Laakiin caqabadaha ayaa sidoo kale aad ugu sarreeya cilmu-nafsiga isboortiga, cilmu-nafsiga sharciga iyo cilmu-nafsiga ganacsiga. Mawduucyadan guud ahaan adag, bilaha diyaarinta badanaa waa lagama maarmaan. Shaqada sayniska ayaa kaa caawin doonta. Qoraal-gacmeedku wuxuu si fiican uga caawin karaa in loo qoro casharradaada waraaqdaada tacliimeed ama taada Qoraal ama qoraalka takhasuska. Qorayaashayada ghostwriters ee ku takhasusay cilmu-nafsiga waxay howshaada uga baaraandegi doonaan cilmigaaga Shaqada guriga, Darajada Bachelor. Waqti u qaado barashada maadooyinka muhiimka ah. U ogolow qoraaga waxbarashadu inuu ku qabto shaqadaada tacliimeed maadadaada sida Statistik qor. Aqoonyahanadeena cilmu-nafsiga waxay shaqadaada waxbarasho ka dhigi doonaan mid guuleysta. Waxaad ka qalin jabisay jaamacad aad u wanaagsan darajooyinka tacliinta sare ee cilmu-nafsiga. Aqoonyahanadeena cilmu nafsiga waxay leeyihiin sanado badan oo khibrad cilmiyeed ah oo ay ku qabtaan shaqada guriga. Qorayaasha cirfiidka ah waxay ku qanciyaan dhaqankooda ku dayashada mudan iyo shahaadada mastarka. Muddo dheer ayaad noo qoreysay. Shahaadada mastarka waxay gacan ka geysaneysaa bixinta tayada loo baahan yahay ee qoraalka ghostwriting. Akhlaaqda qorayaasheena had iyo jeer waxay ku jirtaa danaha macaamilka.
Waxaan kaa caawin karnaa waxbarashadaada oo waxaan gaarsiin karnaa shaqadaada. Kaliya nala soo xiriir, tusaale ahaan emayl ama taleefan. Waxaad sidoo kale codsan kartaa wicitaan bilaash ah hada si aan dib kuugu soo wacno.
Qoraal-gacmeedka guud ee cilmu-nafsiga
Qorayaashayagu waxay hore u leeyihiin mid guuleysta dhammaystiray shahaadada cilmu-nafsiga jeebkaaga iyo sannado badan oo khibrad ah oo ku saabsan aaggaaga cilmi-baarista Tani waxay kaa badbaadinaysaa inaad barato naftaada mawduucaaga. Ma ku kasban kartid khibrada qoraaga cirfiidka muddada dheer gudahaaga muddo gaaban gudahood.
Cilmu-nafsiga cilmiga dawada aadanaha
Sidoo kale gudaha Daawada aadanaha cilmu-nafsiga ayaa noqda lama huraan. Mawduucyada waxaa laga weydiiyaa su'aalo-weydiin. Natiijooyinka waxaa lagu diiwaangeliyay shax ka dibna lagu qiimeeyay barnaamijka softiweerka guud ahaan SPSS. Natiijooyinka waa la fasiray oo la barbardhigay natiijooyinka kooxaha kale ee cilmi baarista. Halkan, sidoo kale, waxaan kaa caawin karnaa shaqo qiimeynta iyo tarjumaadda!
Bal hadda noo kaalay.
Daaweynta xoolaha waa qeyb ballaaran oo cilmi baaris ah. Tijaabooyinka xayawaanku waxay u baahan yihiin in la qiimeeyo oo gabagabada laga soo saaro. Natiijooyinkan iyo dhinacyada cilmi nafsiga ah ayaa u baahan in la qiimeeyo. Caawintaada cilmi-nafsi ahaan, tani waa mid la samayn karo. Waqti qaado si aad u sameyso. waxaan taageero Adiga ayaa leh!
Cilmu-nafsiga nolosha xirfadeed
Haddii aad dhammaysatay shahaadada cilmu-nafsiga, albaabbo badan ayaa kuu furan. Waad abuuri kartaa shirkad ama xarun si toos ah waxaadna u fidin kartaa adeeggaaga. Laakiin sidoo kale waxaad ka shaqeyn kartaa qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha adoo la taliyaya oo ku taageeraya shirkadaha aqoonta aad u leedahay meelaha kala duwan. Tani waxay noqon kartaa heer maamul ama heer shaqaale. Cilmi-nafsi yaqaanka ayaa sidoo kale looga baahan yahay waaxda cilmi-baarista ee shirkadda. Shirkadda Warshadaha dawooyinka bieten mushaar aad u wanaagsan.
Hubinta tayada ee dhinaca cilmu-nafsiga